သတင်း - ဥရောပစျေးကွက်အတွက်ရိတ်သိမ်းချိန်
In မကြာသေးမီနှစ်များ，HBXG ဥရောပစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအားကောင်းစေခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ တုန်းကငါတို့ကသိမ်းထားသည် အလည်အပတ်ing ဥရောပ၌အဓိကစျေးကွက်များ နှင့် အစည်းအဝေး အစွမ်းထက်အေးဂျင့်များ သို့ ဆွေးနွေးပါ ပု ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်များမရ။ HBXG သည်များစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်ညှိments ၏ ပု ပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်s ၏ ပု ထုတ်ကုန်များသည်ဥရောပဈေးကွက်၌ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်းတဖြည်းဖြည်းယုံကြည်မှုကိုရရှိခဲ့သည် ဥရောပ ဓားအားဖြင့်ဖောက်သည်များအရည်အသွေး ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်။ ငါတို့မှာရှိတယ် ငါတို့ပိုင်တယ် အေးဂျင့်များနှင့်သစ္စာရှိသောဖောက်သည်များ. ငါတို့ ရောင်းအားပမာဏ တိုးလာသည် တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်နှင့် HBXG စျေးကွက်ဝေစုကိုတဖြည်းဖြည်းချဲ့ထွင်ခဲ့သည် ဥရောပမှာ.
၂၀၂၀ တွင် COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားချိန် မှစ၍ ဥရောပစျေးကွက်သည်ယေဘူယျအားဖြင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခဲ့သည်မရ။ HBXGတကယ့်အခြေအနေကိုသေသေချာချာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့တယ်s စျေးကွက်၏sကွန်ယက်လူသိရှင်ကြားအားကောင်းလာစေရန်ကူညီပေးသည့်အေးဂျင့်များ၊ ကြိုးစားခဲ့သည် ဖွံ့ဖြိုး ၀ ယ်သူအရင်းအမြစ်သစ်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုစွမ်းရည်တည်ဆောက်မှု၊ ကိုယ်စားလှယ်စနစ်တည်ဆောက်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအစိတ်အပိုင်းများစနစ်တည်ဆောက်မှုတို့ကိုအားကောင်းစေခဲ့သည်မရ။ အခြားတစ်ဖက်တွင် HBXG proအမှိုက်ပုံd ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အသိဥာဏ်အလုပ်သည်အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ies ။ ပြီးတော့ ငါတို့ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်အမြန်နှုန်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအဆက်မပြတ်တိုးတက်စေသည်, အလို့ငှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်s.
မရပ်မနားကြိုးစားအားထုတ်မှုများကြောင့်ဥရောပဈေးကွက်သည်ကပ်ရောဂါတစ်လျှောက်တည်ငြိမ်စွာကြီးထွားခဲ့ပြီးရိတ်သိမ်းမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရိတ်သိမ်းနေသည် အချိန်။ ဇန်နဝါရီလမှစက်တင်ဘာလအထိ ၏ ၂၀၂၁၊ HBXG တည်ငြိမ်သောပုံမှန်အသုတ်ပို့ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်s ဥရောပဈေးကွက်သို့s၊ ဖြစ်ကြသည် ကုမ္ပဏီအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်ကိုဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်တိုးတက်မှုအတွက်အခန်းပိုယူလာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဥရောပဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ခြုံငုံထုတ်လုပ်မှုအဆင့်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များကတိုးတက်ခဲ့သော်လည်း၊ HBXG ဟဲဟဲs စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်အဆင့်မှကွာဟချက်အချို့ရှိသည်။ ထုံးစံအတိုင်း,HBXG ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်များကိုအဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းလိမ့်မည် ဖွံ့ဖြိုး ပို့ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်မူလဖောက်သည်များစုစည်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကြီးမားသောဥရောပစျေးကွက်အတွက်ကြိုးပမ်းပါ။